Amathuluzi kaDAEMON | December 2019
Main Amathuluzi kaDAEMON
Ukusebenzisa amathuluzi we-DAEMON
Isicelo Daimon Tuls silula ukusebenzisa, kodwa namanje umsebenzisi angase abe neminye imibuzo lapho esebenza naye. Kulesi sihloko sizozama ukuphendula imibuzo ejwayelekile kunazo zonke ehlobene ne-DAEMON Tools. Funda ukufunda ukuze ufunde indlela yokusebenzisa i-Diamon Tuls. Ake siqonde ukuthi singasebenzisa kanjani izici ezihlukahlukene zohlelo lokusebenza.
Indlela yokukhipha amathuluzi we-DAEMON
Isidingo sokususa izinhlelo sivela ezimweni ezehlukene. Mhlawumbe lolu hlelo alusadingeki futhi udinga ukukhulula isikhala kwidiski yakho. Njengendlela - uhlelo luye lwayeka ukusebenza noma lusebenza ngamaphutha. Kulesi simo, ukukhipha nokubuyisela uhlelo lokusebenza kuzosiza. Namuhla sizokhuluma mayelana nokususa i-Dimon Tuls - uhlelo oluthandwayo lokusebenzisana ne-disk images.
Ayikwazi ukufinyelela ifayela lezithombe zedhuluzi le-DAEMON. Okufanele ukwenze
Ngokuvamile noma yiluphi uhlelo lokusebenza phakathi nomsebenzi walo lungase lunikeze iphutha noma liqale ukusebenza ngokungalungile. Akuhambisani nalolu chungechunge lwezinkinga kanye nesimiso esimangalisayo, njengezitshalo ze-DAEMON. Ngenkathi usebenza nale hlelo, iphutha elilandelayo lingase livele: "Ayikho ukufinyelela kufayela lezithombe ze-DAEMON". Okumele ukwenze kulesi simo nokuthi ungayilungisa kanjani inkinga - funda.
Ukufaka umdlalo usebenzisa i-DAEMON Tools
Uhlelo lwe-DAEMON lusetshenziswa njalo uma ufaka umdlalo olayishiwe kusuka kwi-Intanethi. Lokhu kungenxa yokuthi imidlalo eminingi ishiwo ngendlela yezithombe ze-disk. Ngakho-ke, lezi zithombe zidinga ukufakwa futhi zivulwe. Futhi uDaimon Tuls uphelele kahle ngale njongo. Funda ukufunda ukuze ufunde indlela yokufaka umdlalo ngokusebenzisa amathuluzi we-DAEMON.
Indlela yokudala isithombe sediski usebenzisa ama-Daemon Tools
Ngokuhamba kwesikhathi, abasebenzisi abambalwa basebenzisa ama-disks, futhi abakhiqizi bekhompuyutha abaningi nabaningi balahla amadivaysi abo okuba nokushayela umzimba. Kodwa akudingeki neze ukuthi uhlukanise neqoqo lakho eliyigugu lama diski, ngoba kwanele nje ukulidlulisela kukhompyutha. Namuhla sizocubungula indlela yokwakha isithombe sedisk.
Indlela yokufaka isithombe ku-DAEMON Tools Lite
I-Daimon Tuls Light kuyinto isicelo esihle sokusebenzisana ne-ISO disc izithombe nezinye izithombe. Ikuvumela ukuba ungene futhi uvule izithombe kuphela, kodwa futhi udale owakho. Funda ukufunda ukuze ufunde ukufaka isithombe se-disk ku-DAEMON Tools Lite. Landa bese ufaka isicelo ngokwaso. Landa ama-DAEMON Amathuluzi Ukufakwa kwe-DAEMON Tools Lite Ngemuva kokusebenzisa ifayela lokufaka, uzonikezwa ukukhetha kwenkululeko yamahhala nokuvuselela okukhokhelwe.
Izinkinga ngokukhuphula isithombe ku-DAEMON Amathuluzi nesisombululo sabo
I-DAEMON Amathuluzi ingenye yezinhlelo ezinhle kakhulu zokusebenza nama-disk images. Kodwa ngisho nakuhlelo olunjalo lwekhwalithi kukhona ukuhluleka. Funda lesi sihloko ngokuqhubekayo, futhi uzofunda ukuthi ungaxazulula kanjani izinkinga ezivame ukuvela lapho ubeka isithombe ku-Daimon Tuls. Amaphutha angabangelwa ukusebenza okungalungile kwalolu hlelo, kodwa futhi nangesithombe esiphukile sediski noma ngenxa yokukhipha izingxenye zohlelo.
Iphutha lomshayeli we-SPTD DAEMON Amathuluzi. Okufanele ukwenze
I-Daymun Tuls uhlelo oluhle kakhulu lokusebenza nama-disk images. Kodwa ngisho nesisombululo esinjalo sesofthiwe esiyinkimbinkimbi ngezinye izikhathi sihluleka. Enye yezinkinga ezivame kakhulu yiphutha lomshayeli. Izindlela zokuxazulula inkinga ngezansi. Iphutha elinjalo alivumeli ukusebenzisa uhlelo - ukubeka izithombe, ukubhala, njll.
https://termotools.com zu.termotools.com © Amathuluzi kaDAEMON 2019